Home » Lahatsoratra farany farany » WTN » Fampandrosoana ny fitarihana ekipa amin'ny fotoana tsy azo antoka
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • WTN
Ny lafiny rehetra amin’ny fitsangatsanganana sy ny fizahantany, na eo amin’ny sehatra tsy miankina na eo amin’ny sehatry ny fanjakana, dia nianatra fa amin’izao tsena tsy milamina izao; ny fiaraha-monina ary na dia ny firenena iray manontolo aza dia mila miara-miasa amin’ny tombontsoa iombonana.
Dr. Peter Tarlow, filohan'ny World Tourism Network, ary mpanorina ny Tourism Titbits dia nanoratra ity tantara manan-danja ity momba ny fitarihana ekipa tamin'ny fotoana COVID-19.
Matetika loatra ireo matihanina amin'ny fizahantany dia miresaka momba ny “fiaraha-miombon'antoka sy fitarihana ekipa”, saingy indrisy fa ny tena tian'ny maro amin'izy ireo holazaina amin'io fehezanteny io dia hoe: “Andao hojerentsika izay azonao atao ho ahy.”
Ny fizahantany mifantoka amin'ny masoivoho anefa, amin'izao vanim-potoanan'ny krizy mifandraika amin'ny toetr'andro izao, dia mihasarotra ny fitantanana amim-pahombiazana ny ady, ny korontana ara-politika ary ny areti-mifindra.
Mila miara-miasa ny fiaraha-monina eny fa na dia ny firenena manontolo aza mba hisian’ny soa iombonana.
Mba hanampiana anao hahatratra io haavon'ny varotra fiaraha-miasa sy fahombiazana io dia diniho ireto hevitra manaraka ireto:
· Hevero ho mitovy ny mpiara-miasa aminao fa tsy ho olona mila leferinao. Matetika loatra isika dia mijery ny mpiara-miasa amin'ny fizahantany amin'ny alàlan'ny prisma amin'ny orinasantsika ihany. Tsy misy orinasa fizahan-tany iray; fa ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany dia rafitra velona misy ampahany manan-danja maro izay miara-miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny vatan'olombelona. Raha misy ampahany tsy mahomby, ny rafitra manontolo dia mety hahatsapa ny fiantraikany.
· Ampitomboy ny fifanajana sy fifampitokisana. Tena ilaina ny hisian'ny tanjona iraisan'ny fizahantany izay mandeha amin'ny rafitra iray ihany. Na dia samy manana ny fahaiza-manaony sy ny haavon'ny fahaiza-manao aza ny olona samihafa, ny zava-misy dia ny fanatratrarana tanjona dia asan'ny tsirairay. Mila mitadidy ireo tompon'andraikitra amin'ny fizahantany fa ao anatin'ny sehatry ny matihanina izy ireo, tsy mila ho naman'ny mpiara-miasa aminy, fa mila mampivelatra fifandraisana tsara amin'ny asa.
· Aza matahotra ny handeha amin'ny tsinainao. Misy fotoana izay na inona na inona lazain'ny tsinainao dia milaza aminao fa tsy izany no fanapahan-kevitra marina. Matetika ny intuition dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Na dia tsy te hiraharaha ny angon-drakitra mihitsy aza izahay, aza atao tsinontsinona ny fihetseham-ponao.
· Miezaha hanana traikefa mahazatra amin'ny fiarahana amin'ny mpiara-miasa. Matetika isika no mitsara ny hafa satria mihevitra fa azontsika ny raharahan’ilay olona. Tsy hevitra ratsy ho an'ny talen'ny CVB ny mandany fotoana kely miasa ao amin'ny hotely, trano fisakafoanana ary toerana mahasarika mba hahatakarana amin'ny fomba fijery mivantana ny fanamby sy ny fahafaha-manao. Toy izany koa, ireo hotely izay mety mitsikera ny ezaka ara-barotra ao an-tanàna dia mety handany andro isan-taona ao amin'ny CVB na biraon'ny fizahan-tany mba hianatra ny tantara anatiny momba ny varotra manerana ny faritra na ny mifamadika amin'izany.
· Mamorona firaisankina. Na inona na inona mety ho tohan-kevitra anatiny ao amin'ny fikambanana misy anao, dia tokony hijanona ao anatiny izy ireo. Tena manimba ny indostrian'ny fizahantany izany rehefa avoaka ampahibemaso na avoaka amin'ny gazety ny hevitra anatiny. Ny zavatra mitranga ao anaty efitrano dia tokony hijanona ao amin'ny efitrano fivorian'ny birao. Ampianaro ny olona ao amin'ny indostria fa ny andraikitra dia miteraka andraikitra vaovao ary sarotra kokoa (ary matihanina kokoa) ny miasa amin'ny fitazonana vondrona iray noho ny fandravana azy.
· Mifampianara. Mandehana any amin'ny toerana hafa ary raiso an-tsoratra, ary zarao amin'ny mpiara-miasa aminao izay nianaranao. Ny vondrom-piarahamoninao dia tsy voatery ho voalohany amin'ny hevitra vaovao, fa mianatra avy amin'ny hafa ary avy eo tonga lafatra ny heviny. Raiso ny zava-dehibe amin'ny hevitra tsirairay ary ampifanaraho amin'ny toe-javatra iainanao manokana ireo hevitra.
· Mamorona rafitra mpanoro hevitra. Ny fizahan-tany dia sehatra sarotra ka mila mpanoro hevitra isika rehetra. Ny mpanoro hevitra dia tokony ho mihoatra noho ny mpampianatra. Ny mpanoro hevitra dia tokony ho olona izay manery antsika hahita ny sary lehibe amin'ny ankapobeny sy ny fomba hifandraisan'ny singa tsirairay amin'ny fizahantany. Ny mpanoro hevitra tsara dia tokony hanompo antsika tsirairay avy amin'ny maha-mpandraharaha amin'ny tambajotra izay afaka mampahafantatra antsika amin'ny olona ivelan'ny faribolan'ny orinasantsika. Ao amin'ny orinasa iray izay matetika tsy milaza amintsika ny tena fitarainany ny mpanjifa ary tsy miverina fotsiny, mila mpanoro hevitra ny tompon'andraikitra ara-pizahantany rehetra izay afaka miasa ho toy ny fahatokisana, mpanentana andrasana, mpanara-maso ny zava-misy ary manampy azy ireo amin'ny fitadiavana fomba vaovao amin'ny olana maharitra sy fanamby vaovao.
· Manapaha hevitra amin'ny fomba hizaranao ireo loharano sarobidy. Tsy misy vondrom-piarahamonina na firenena manana loharano tsy voafetra. Ataovy aloha ny fikarohana mba hahazoana antoka fa misy dikany ny fizarana loharanonao na amin'ny fotoana fohy na amin'ny fotoana maharitra. Amin'ny fampivelarana ny famatsiana loharanon-karena, manomboka mieritreritra ivelan'ny boaty. Ohatra, misy fifandraisana ve eo amin'ny fiarovana sy ny marika vokatra ao amin'ny tontolo post 9-11? Moa ve misy dikany amin'ny tsenan'ny demografika na niche anao ny dokam-barotra klasika? Farany dia aza adino fa misy foana ny fahatarana eo amin'ny fizahantany. Midika izany fa amin'izao vanim-potoanan'ny covid izao dia tsy maintsy ho tena mahay mamorona isika. Amin'ny fomba mahazatra, ny vanim-potoanan'ny fahombiazana dia taratry ny asa tsara nandritra ny taona maro lasa. Toy izany koa, ny morontsiraka fa tsy ny fanorenana dia mety hiteraka olana lehibe ao anatin'ny taona vitsivitsy.
· Mahomby, ary aza adino ny mitsiky! Miezaha hamantatra ny fomba ahafahan'ny politika mamokatra vokatra tsara mihoatra ny iray. Tsy vitan'ny hoe tokony ho vonona ny hanodina ny vokatra taloha isika, fa ny fahombiazan'ny famoronana dia mety hidika koa amin'ny fanodinana ny fanentanana ara-barotra teo aloha, ny politika taloha na ny fanodinana ny fomba fampiasana ny tany. Tsarovy fa miova ny fotoana ary ny politika iray izay mety tsy nahomby tamin'ny vanim-potoana iray dia mety hahomby amin'ny vanim-potoana hafa.
· Manakarama olona tsara indrindra azonao atao. Ny indostrian'ny fizahantany dia mifototra amin'ny fahaiza-manaon'ny olona sy ny maha-olona. Tsy misy afaka manimba ny indostrian'ny fizahantany mihoatra noho ny olona miasa ao izay tsy tia olona. Na dia tsy miantoka ny serivisy mpanjifa tsara aza ny mpiasa afa-po, ny mpiasa tezitra dia saika miantoka ny serivisy mpanjifa ratsy. Manokàna fotoana hanajana ny olona ary omeo fiofanana tsara indrindra izy ireo, tsy eo amin'ny sehatry ny fahaizany ihany fa amin'ny sehatra fizahan-tany hafa koa. Rehefa manao zavatra tsy mety ny mpiasa dia aza mandefa solon-tena fa aleo manafay olona ambony. Tsarovy fa na manao ahoana na manao ahoana ny tsy tian'ny mpitantana ny fizahantany manafay ny hafa dia misy fotoana tsy misy fomba hafa.
Bebe kokoa momba ny World Tourism Network ao amin'ny www.tv.travel
Bebe kokoa momba ny fizahantany Titbits sy ny fizahantany ary ny maro hafa: tourismandmore.com